Fanomanana lasy nasionaly
Lasim-paritany ao Tanandava ataon’ny Tily avy amin’ny faritanin’ny Toamasina
Nanomboka ny faha 22 aprily ka hifarana ny 26 aprily ho avy zao. Izay ahitana tanora scoute miisa 800 mahery ary mihoatran’ny 50 ny filoha mpitarika. Araka ny fantatra dia nahatonga solontena avy ny tily aviamin’ny distrika ato anatin’ny faritanin’ny toamasina. Ny tily moa, zay fikambanana scoute ivondronan’ny Protestanta, isan’izany ny FJKM, Anglican, METM, FLM. Ny teny nanainga tamin’ity lasim-paritra ity di any hoe “Mijoroa amin’ny tsara”.
(24) Prud′homme RAKOTOSON : 24-04-2014 - 18:00